2020 Ciyaar Moobaylka Khamaarka Khamaarka Sare ah - Ciyaaraha Kalluunka ee Faa'iidada Sare leh. Habeeyn Software Software. Boorar aad u fiican.
Hoyga » Wax soo saar » 2020 Ciyaar Moobaylka Khamaarka Khamaarka Sare ah
1. In ka badan 50+ Ciyaar cajiib ah
2. Ciyaar Khamaaris Faa'iido Badan & Wadaag Online Ghanna weyn
3. 10000+ Ciyaartooydu waa khadka tooska ah isla waqtigaas
4. Astaamaha Ciyaarta Sawirada Sawirada Taleefankaaga
Ciyaarahaaga Ciyaaraha ee aad ugu Jeceshahay - Socda!
Waan ognahay inaad jeceshahay miisaska ciyaarta kalluunka dhaqameed ee laga helo arcade aad jeceshahay. Laakiin ka waran hadaan kuu sheegno, waxaad marin uga heli laheyd ciyaaraha miiska kaluunka aad jeceshahay isla markaaba qalabkaaga mobilada? Ka hadal ku habboon, madadaalo aan joogsi lahayn! Barnaamijka 'V-power App' wuxuu bixiyaa qaab cusub oo marin loogu heli karo kalluunka / ciyaaraha xilli walba, meel kasta. Haddii aad tahay ciyaar jecel kalluunka / ciyaarta ciyaarta ama aad ku leedahay miiska ciyaarta kalluunka / khamaarka goobtaada ganacsi, waxaan aaminsanahay inaad jeclaan doonto sahlanaanta inaad kala soo baxdo barnaamijkeena si aad ugu ciyaarto guriga ama aad ugu soo bandhigto martidaada arcade qaab ka duwan sidii ay ugu ciyaari lahaayeen ciyaarahooda ay jecel yihiin.
The V-awood Abka waxaa loo sameeyay si loo siiyo ciyaartoy isla waayo-aragnimo is-dhexgal iyo soo jiidasho leh oo ay ka heli lahaayeen ka ciyaarista kalluunka ay jecel yihiin ee arcade maxalli ah, Kaliya iyada oo lagu daro ku darida inaad awood u leedahay inaad ciyaarto wakhti kasta, meel kasta. The V-awood App waxaa lagala soo bixi karaa labada qalab ee IOS iyo Android. Ka ciyaar taleefankaaga ama kiniinigaaga markasta oo aad niyadda ku hayso tartan saaxiibtinimo oo lala yeesho isticmaaleyaasha kale ee khadka tooska ah isla markaana muuji xirfadahaaga si aad abaalmarin u kasbato!
Tallaabada 1: Fur boggayaga (https://www.vmight.xyz/#/download/index) leh biraawsarka internetka ee qalabkaaga gacanta (iPhone, Ipadka, Android).
Taabo batoonka geeska midig ee kore ee oranaya "DOWNLOAD"
Xulo badhanka "dhagsii rakib".
Tag goobaha taleefankaaga oo fur "Maareynta Qalabka."
Xulo Shenzhen Foresight oo dooro "Kalsoonida."
Dhagsii badhanka geeska kore ee midig "DOWNLOAD"
Ku rakib V-power.apk.
Tallaabada 2: Fur barnaamijka V-power ee aaladda moobilkaaga oo ku qor aqoonsigaaga isticmaalaha iyo lambarka sirta ah ee aad gasho.
Tallaabada 3: Ku raaxeyso ku ciyaarida ciyaaraha aad jeceshahay markaad socoto barnaamijka V-power App!